Blog Aha Echiche: Atụmatụ Iji Họrọ Der Blog von zuru okè Aha N'ihi na gị
Ịkpọ Blog nwere ike ịbụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị nwere ike iji ọtụtụ warte na-atụgharị uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke beschissen.
3 Ntuziaka # 3: Jiri Nomen, Verben, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
Aha Blog gị kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. Waren Sie na ị nwere Blog nke a na-akpọ "Feinschmecker-Ecke" ma ọdịnaya gị bụ maka ịtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, ị ga – eme ka ndị na – agụgụ ihe na –
Ọ bụrụ na ị chọrọ malite blog nri, ị ga-eji okwu ndị metụtara nri ma ọ bụ iri nri (ya bụ, naschen, vegan, gesund, chomping, wdg).
Tinye okwu ndị ahụ n’ime thesaurus.com na ị ga-enweta okwu ndị dị ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, Leckereien, nri, Knabbereien, ike, obi, Gemüse, na obi ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (dị ka vegane Knabbereien oder Kwado nri nri) na voila, w nwere aha maka blog gị.
Mgbe ị nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog, ị nwere ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa maka ndepụta okwu.
Ntuziaka # 3: Jiri Nomen, Verben, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
W nwere ike ikpebi na iji thesaurus ahụ zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na ọkwa ọzọ, malite na-agbakwụnye mkpụrụ okwu, okwu Verben na / ma ọ bụ nkwa.
Ntinye ederede, Verben, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. ỌZọ, ọ na-enyere alias izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Site na nchịkọta ihe oriri, w nwere ike itinye okwu okwu ma ọ bụ nkọwa ndị na-adabere na gị dịka Blogger, nke nwere ike ịbụ: onyeisi, nwa okorobịa, nwa agbọghọ, onye mb , nri ehihie, ụlọ ọrụ, wdg
Debe ha ọnụ na ị ga-enweta ihe bara nnukwu uru dị ka nri ụmụaka kwesịrị ekwesị, vegane Boss-Knabbereien, ntụ kka kichin ọhụrụ, ma ọ bụ ụlọ oriri na-edozi ahụ.
Atụla egwu ịnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. W nwere ike imeri aha dị mma nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chere!
saịtị dị ka Wordroid.com bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji na-ejikọ ọnụ na okwu ọchị ma ọ dị mfe ime. Naanị tinye okwu nke metụtara ọdịnaya gị, pịa bọtịnụ "Wordoids", ọ ga-enye gị ndepụta aha ndị w nwere ike iji.
Ihe dị ukwuu banyere Wordroids bụ na ị nwere ike ịtọ ókè gị na okwu gị, kọwaa àgwà nke okwu ahụ, setịpụ ụkpụrụ ya, na ọbụna gụnyere ngalaba aha nnweta. Nke a pụtara na ị nwere ike ịchọpụta ma aha ịchọrọ ịdenyere aha na .com ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ewepụta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e waren ya.
Ka o sina dị, ịmepụta aha agaghị abụ usoro ihe omimi. Nwee obi ọtọ ma soro ya mee ihe na ndị gụrụ gị ga-ahụ nke ahụ.
Ozugbo ị nwetara nke ahụ n’ụzọ debanye aha gị blog ngalaba, ị na-elekwasị anya n’ihe ndị ka mkpa dị ka ede ederede episch na eto eto gi.
Kedu i mgbagwoju kachasị na blogger ọ b nala na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na բլոգեր ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka blog
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na bloger ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka blog